The Ab Presents Nepal » गणेश भगवानको पुजा गर्दै माघ ७ गते मगलबारको राशिफल पढ़ौ दिन सुभ रहने छ !
गणेश भगवानको पुजा गर्दै माघ ७ गते मगलबारको राशिफल पढ़ौ दिन सुभ रहने छ !
मिन राशि – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि – नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आटँ र साहशको कमि आउनेछ । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ । मध्यान पश्चात ब्यक्तिव बिकाशमा जुट्ने समय रहेको छ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । बिश्वासिला ब्यक्तिहरुबाट धोका हुन सक्ने